Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji ewe iwe? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Kezọ ọgba igwe - ajụjụ a na-ajụkarị
Kezọ ọgba igwe - ajụjụ a na-ajụkarị
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji ewe iwe?
A igwe kwụ otu ebeiwemerenụ nwere ike ibido n'ihi na aonye na-agba ígwè, ọkwọ ụgbọala, ma ọ bụ onye na-agafe agafe kwenyere na onye ọzọ na-eji ụzọ eme ihe adịghị mma, na-emebi iwu okporo ụzọ, ma ọ bụ n'ọtụtụ ọnọdụ n'ihi na mmadụ chere na omume nke onye ọzọ na-eji ụzọ eme ihe na-emebi nchekwa ha.
Ebe ọ bụ na m na-anya ụgbọ ala a, ọ na-adọba ya n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe. Echere m, Anaghị m adọba igwe kwụ otu ebe n’ahịrị, agaghị m enwu enwu, ọ gaghị agbapụta nfuli m Otu, abụọ, atọ m enweghị ike ịchịkwa, n'okporo ámá ndị m nwere ike ijikwa naanị m. nabata onye na-agba ịnyịnya- Ndụmọdụ iwe ok ugbu a ka anyị bido na ndetu somber dị ka anyị niile maara aMiche siri ike ruo ụbọchị 30 na-enweghị ihe merenụ, mana n'otu oge adịghị ike ọ laghachiri, ọkwọ ụgbọala mere gị nke a, ka anyị nweta ya Ozugbo anyị nụrụ Michel ihe ọ ga - ekwu, nwunye, ọ dị mma, ihe niile malitere mgbe nwunye m kpebiri ịsa ahụ ụgbọ ala, ọ maghị na ọ dị njọ na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ na ọ chọghị ịma onye ọ bụ Bigoil o doro anya na m na-agba ya alụkwaghịm, mana m na-agba ya ume? Ndị ọka iwu nwere akwụkwọ m na-afụ site na ọkụ na-acha uhie uhie na onye nzuzu a na-eji aka gị maa m ibu nke ụgbọ ala ya na ị bụ iwu na-akwadoghị Lee na windo dị ka ibu ị naghị ahụ m n'agbanyeghị na ị na-enweghị isi na-esi ísì enwere esemokwu na tupu m gafere n'etiti ihe ndị ọzọ agbajiri m mkpịsị ụkwụ m wee gbapụ taya ya, yabụ onye bụ onye nzuzu ugbu a, ọ ga-akwụ ụgwọ maka ya n'ihi na enyerela ya iwu ugbu a amaara m dị ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè anyị na-eji oke iwe , dịkwa mma mana anyị nọ ebe a ikwu maka ya ụnyaahụ otu onye ọkwọ ụgbọ ala gwara m ka m jiri ịnyịnya ígwè m na-aga n'okporo ụzọ ị na-nzuzu enyi okay na kedu ka nke ahụ siri nyere gị aka na ọ gaghị eme nke a ọzọ ọ dị mma bụ ọbara na uwe elu m chere na ị maara oge ikpeazu ọ kpọrọ m smug dịkwa mma, echere m na anyị niile nwere ike ịbelata obere smug banyere inwe afọ ojuju maka ichegbu onwe anyị banyere pl, mana ee amaara m na ndị ọkwọ ụgbọ ala a agaghị amụta sayensị anyị maara na ha bụ obere ọkụ na-enwu gbaa, kedu Anọ m na-eme n'oge na-adịbeghị anya bụ ịnweta mpi voodoo site na carone ụmụ okorobịa atọ anyị ga-enweta tozọ ịchọta ụgbọ ala ndị ahụ na ụgbọala na gwongworo na ụgbọ ala ụgbọala na-agba ọsọ na-enye aka cheta naanị ihe ị nwere ike ime bụ ilekwasị anya n'otú ị ga-esi zere ịkpalite mmadụ abụọ n'ime isii n'ime gị na-arụ ụka n'ụzọ ebe a ihe na-agwa gị na ị nwere ihe mere ọ dị mma atọ n'ime isii? Did mere ihe, ọfụma, abiarala m oge ezipụ ka m na-atụ bọmbụ n’ugwu na igwe kwụ otu ebe m na-aga n’etiti abalị, yi uwe ojii niile n’oké mmiri ozuzo, agbajiri m nwa m n’ihu nwa n'azu aga m egbutu umuaka abuo. M na-acho umuaka m choro m kporo umuaka anya. M leliri elu wee hu ndi ojoo a na-acho m ozi ma na-anya m na ekwe nti m Na-esote, m na-amị na ice rink na atọ niile anyi site na ulo ogwu oh chim na onye na-anya ugbo ala nwere ike gbapu onwe ya, ikekwe ulo ya hisman chill okay ụmụ okorobịa ị naghị ahụ ụkpụrụ ebe a ị na-abanye n'ọnọdụ ndị a na-agba ụgbọ ala site na ihe ịrịba ama nkwụsị onye ọ bụla maara akara nkwụsị bụ ee -ihe ngosi nke ihe ojoo bu ihe nile bu obi ojoo na i maghi emebi mmebi ahihia? mee biker i cheghi na m di njikere inwu n'ihi ihe m mere mgbe ufodu, m na-arọ nrọ a ebe ugbo ala ruru m aka wee gbue m, mgbe ahu m na-achi ochi n'elu igwe n'ihi na o doro m anya na m choro ibu martyr n'ihi ya mere m ji sị na anyị na-eme igwe ngagharị ọ bụla bụ otu nzọ ụkwụ dị nso iji nweta ụgbọala n'okporo ụzọ dịka ọ nweghị onye hụrụ oh mba ọ bụ onye ziri ezi onye ya na m maara na ọwara n'okporo ámá na-eduga n'okporo ụzọ kpuru ìsì, ọ fọrọ nke nta ka m nwụọ ebe ahụ , ee ugbo ala anyi agaghi ahu na Uspain aghaghi inwu ma umuaka anyi nwere ike biri na uwa ya na igwe gbajiri agbaji, mana gini ka igaghi eso ha? Enweghị m igwe kwụ otu ebe ọzọ. Nwanyị were ya mgbe m gbara alụkwaghịm ma na-aghọ aghụghọ na mụ onwe m
Kedu ihe kpatara asị asị ndị ọgba tum tum n'Australia?
Onye AustraliaOmenala yiri ka o nwere ihe ojoo megidendị na-agba ịnyịnya ígwè. Ọtụtụ intone na ọ bụ n'ihindị na-agba ịnyịnya ígwè'weghara ohere dị ukwuu n'okporo ụzọ' - ịnweta nkeji ahụ n'ụbọchị gị na-eme ihe dị iche. Ndị ọzọ na-ekwu na ha 'anaghị erube isi n'iwu ụzọ' n'ihi na onye ọ bụla P-plater dị ebe ahụ nwere akara mmado maka iwu ahụ.26 2015.
mọzụlụ ejiri na otu ụkwụ itule
Kedu ka m ga-esi kwụsị ọnụma m n'okporo ụzọ?
Atụmatụ 8 iji nyere ndị ọkwọ ụgbọala akazere iwe n'okporo ụzọ
Mee atụmatụ n'ihu - Nye onwe gị ọtụtụ oge naokporo ụzọ.
Dajụọ onwe gị - Gee egwu na-atọ gị ụtọ, wetuo ike gị.
Hapụ ha - Gagharịa ma ọ bụrụ na mmadụ na-atụgharị gị.
Emela -Zereanya kọntaktị naiweọkwọ ụgbọala na-enye ha ohere.
Bụrụ onye tozuru etozu - eleghara mmegharị anya nke omume rụrụ arụ.
Ndewo Smart Drivers, Rick na Smart Drive Test na-agwa gị okwu banyere ịkwanye ugwu taa. Ee, ime ihe ike n'okporo ụzọ. Enwere m okwu si Nathaniel 1 ruo 10 ma ọ chọrọ ịma otu esi emeso ndị na-asọpụrụ ụzọ mgbe ha na-anya ụgbọ ala.
Chọghị igbochi ha, mehie ihe, ma nke kachasị mkpa, achọghị ịdị ka onye nzuzu n'ihi na ọ na-eme ihere mgbe ị mejọrọ n'okporo ámá. O di nwute, ọ bụrụ na anyị na-amụta n'ụzọ ụfọdụ ụgbọala gị, nwa ewu ina ẹsịn ke miri emi ọgwụgwụ n'ihi na ọ dịghị mma ebe na-aga. Ọ dị mma, mgbe gị na onye na-akụzi ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ onye ndụmọdụ nọ, ụdị mmadụ ahụ, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịrụ ọrụ n’ebe a na-adọba ụgbọala tupu ị banye n’okporo ụzọ.
N'ebe a na-achịkwa ya, mara nke ọma na njikwa mbụ ma mee ka onwe gị nwee ntụsara ahụ mgbe ị na-eji nwayọ nwayọ tupu ị pịa ụzọ. Ma pukwala ma bido rụwa ọrụ n’ebe ụzọ mgbagwoju anya dị ka nke dị n’azụ m. Malite na ala ịta ahịhịa dị jụụ.
Yabụ ị nwere ike iji nkuku, ikike aka nri na aka ekpe yana ihe ndị yiri ya. So mpi - kedu ka anyi si emeso mpi? Nke mbu, mgbe mmadu na-egbu opi ha, ị maara ihe niile ga - eme mgbe ị mụtara ịkwọ ụgbọala, ọ bụghị ma ọ ga - eme ya! Ọ dabere mgbe ọ ga-eme, mana mara na ọ ga-eme; Ọ bụrụ n ’ị mara na ọ ga - eme na ndị ọzọ na - eweso gị iwe na - amụ ịkwọ ụgbọala, ha ga - adị nsọ, ọ bụrụgodi na ị nọ n’ụgbọ ala ịnya ụgbọ ala, ha ka ga na-asọpụrụ gị. Ya mere mara na ọ ga-eme ma ọ bụ naanị oge ọ ga - eme.
Mgbe ọ mere, were ikuku dị ka onye nkụzi m na-anya ịkwọ ụgbọala onye kụziiri m otu esi abụ onye nkuzi ịkwọ ụgbọ ala kwuru: ọ bụrụ na ndị mmadụ asọpụrụ gị, ha nwere nhọrọ atọ: 1) ha nwere ike ichere gị; 2) ha nwere ike ịbanye na gị, nke nwere ike ọ bụghị ihe ha ga-achọ; 3) ma ọ bụ na ha nwere ike ịla ụlọ ma juo oyi.
N'ihi na ọ bụ naanị ihe ịrịba ama nke iwe, na mgbe ị mụtara m maara na ọ siri ike, mana ị ga-eku ume miri emi gaba n'ihu. Maka na ndị mmadụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ agaghị arụgide gị ma mee ka ị gaa ije mgbe ị na-ekwesịghị ịkwọ ụgbọala. Karịsịa mgbe ị na-atụgharị aka ekpe na mgbagwoju anya mgbagwoju anya dị ka nke dị n'azụ m.
Maka na ọ bụrụ na ịpụpụ ma oghere ahụ ezughi, ị ga-ejedebe na ndakpọ. You ga-ejedebe na ihe ọghọm dị egwu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwere onye njem n'ụgbọ ahụ. Maka T-bonecrashes so n’otu ihe ọghọm kachasị egbu egbu anyị nwere taa n’ihe gbasara ọghọm ụgbọala na nkukota n’okporo ụzọ anyị.
Ya mere, mara na na n'aka ekpe, mgbe ị na-enwe nrụgide, ị naghị etinye aka na nrụgide ahụ. Were ume ma pụọ ​​mgbe ahụ ruru gị ala ma ọ bụ mgbe ọ dị mma. Ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị gaghị enwe ike ịga ije ma enweghị ike ịnagide nrụgide ahụ, kagbuo ntụgharị ahụ - gaa ogologo ma gaa n'ihu, ọ bụrụ na ịchọghị ịtụgharị aka ekpe na nkwụsịtụ mgbagwoju anya, mgbe ahụ nka adịghị dị nnọọ ụgbọala na-eme ka atọ nri uzo.
Ma mgbe ahụ ị nwere ike ịlaghachi na nkwụsị ahụ wee gafere ya. Yabụ honk, ọ dị nwute na oge ịkwọ ụgbọala mmadụ, nke a bụ naanị ihe ịrịba ama nke iwe iwe na ndị ọzọ enweghi ndidi. Ma ọ bụ otu n’ime njirimara nke ịkwọ ụgbọ ala.
olee otu m kwesiri ime otu ubochi
Ya mere, mụọ miri emi ma lekwasị anya n’ihe ị na-eme, ọ bụghị ihe ndị ọzọ na-eme. Ha nwere ike ịla n'ụlọ ebe ahụ ma ọ bụ chere gị.
Ya mere mara na ha bu ndi nzuzu. Ikwesiri ilekwasị anya n'ihe ị na-eme! Ya mere nke a dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-amụ ịkwọ ụgbọala ọzọ. Ajụjụ nye ndị ọkwọ ụgbọ ala m: you nwere ndụmọdụ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ na-amụ ịkwọ ụgbọala na ndị ọzọ na-afụ opi ha? Hapụ okwu n’ebe ahụ na ngalaba nkọwa - ihe a niile ga - enyere ndị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ aka ịmụta ịkwọ ụgbọala.
M na-Rick na Smart Drive Ule. Daalụ maka ikiri. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ị na-ahụ ebe a, kekọrịta, denye aha, hapụ otu okwu na ngalaba nkọwa.
Ọzọkwa pịa bọtịnụ mkpịsị aka. Lelee isiokwu ebe a na ọwa mgbe ị na-aga ịnweta ikikere ọkwọ ụgbọ ala gị ma ọ bụ ịmalite ọrụ gị dị ka gwongworo ma ọ bụ onye ọkwọ ụgbọ ala. Ọtụtụ ozi dị ukwuu ebe a yana ozi dị mma na weebụsaịtị m yana ọmụmụ ihe n'ịntanetị ị nwere ike ịzụta.
Nọgide na njedebe nke isiokwu ahụ, okwu na-atọ ọchị na njikọ na isiokwu ndị ọzọ na weebụsaịtị m. Daalụ ọzọ maka ikiri. Jisie na uzo gi nwale.
nyocha ohuru banyere abụba juputara
Chetakwa, azịza ikpeazụ nwere ike ọ gaghị amata azịza ziri ezi. Nwee ọmarịcha ụbọchị. Ehee ị ga-enwe ihe ọghọm ma ị ga-enwe ihe ọghọm ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwere onye njem n’ụgbọ ahụ.
Maka na ọghọm T-ọkpụkpụ bụzị otu n’ime ihe mberede okporo ụzọ kacha egbu egbu na okporo ụzọ anyị. Ya mere mara na na aka ekpe ntụgharị ma ọ bụrụ na ị nọ na nrụgide ị gaghị aga
Kedu ka ị si emeso oke iwe n'okporo ụzọ?
Ndị ọkwọ ụgbọala nwere ike ịnagide site n'iji ezi obi na-ele omume ịkwọ ụgbọala ha anya na ịnwa ibelata nrụgide nrụgide ha.
Nweta Zs gị.
Mee atụmatụ n'ọdịnihu.
Cargbọ ala gị abụghị ọgwụgwọ ọrịa.
Tọgharia, ma kuo ume:
Ọ bụghị banyere gị.
Iro iro na-egbu egbu.
Jiri ụkpụrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ.
Iwe iwe n'okporo ụzọ bụ eziokwu na ụwa niile, mana ịzaghachi ya nke ọma bụ akụkụ dị mkpa nke nchebe onwe anyị na-arụsi ọrụ ike. Nabata na nkuzi nchedo onwe onye nke oge a bụ m onye ọbịa gị, John Correa Ihe mmụta taa na-abịakwute anyị n'okporo ụzọ Gwinnett County na mpụga Atlantain Georgia na United States mgbe m nyochachara nke ọma n'oge na-adịbeghị anya, m gbanwere OC spray kwa ụbọchị na Palm Personal Defense Spray, ọ bụ ihe ojoo ma ana m akwado ig u akuko akuko a Onye na-akwọ ụgbọala a bụ nwa nwoke 18 dị na Dash cam na nke a bụ ụfọdụ okporo ụzọ, nke ahụ dị na Gwinnett County na mpụga Atlanta, ntakịrị ntakịrị ọwụwa anyanwụ nke Atlanta m na-eche, na mgbe ihe me ara nwoke a biara n'ubu ya wee malite ibata na ụdị nfụkasị na ha echeghị m na ha metụrụ ibe ha aka, mana ọ dị ntakịrị ma ọ bụ otu a ka nwoke a si pụta na iwe na-ewe ya. Ugbu a gụọ akụkọ.
Nwoke a nwere nsogbu iwe iwe tupu anyị ahụ ihe na-eme ha n'akụkụ windo mana nwa okorobịa ahụ ga-esi na windo ahụ gafee, ị ga-ahụ etu o si aga na nkeji. Ha sere okwu ebe a, lee ntụmadị ọ kụrụ onye ọkwọ ụgbọala anyị ma jide igodo ya can hụrụ na ọ bụ onye ọkwọ ụgbọ ala igodo ụgbọ ala Ọ nwere n'aka ya ga-akwọ ya ụgbọala ahụ ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ụsụ pụta wee soro Ihọd na ha nwere ntakịrị ụra ebe ahụ, gịnị mere na nwoke ahụ jidere ya n'olu wee gbadaa n'okporo ụzọ awara awara, gụọ akụkọ akụkọ ahụ, onye? Ekwuru na ọ dọkpụrụ ya otu kilomita n'okporo ụzọ awara awara na ihe karịrị 40 mph ma mesịa hapụ ya ka ọ laa. Ndị uwe ojii jidere onye na-eme ihe ebe a, ị pụọ, ọ dị mma, otu n'ime ụzọ iji meziwanye njide onwe gị bụ ịga leta anyị na ibe facebook, bulite nọmba facebook gị ma chọọ nchekwa onwe gị, ọ ga-ri Ọ bụrụ na ịpị na-akụ bọtịnụ dị ka ị ga-enweta isiokwu na njikọ sitere na weebụ niile iji nyere gị aka ịka mma ma chee maka ịgbachitere onwe gị n'ụzọ dị omimi ma dị mkpa karịa ngwaọrụ gị nke ọma gụnyere iko nke ụgbọ gị ma achọrọ m iche echiche banyere uru nke anyị ihe onwunwe na mgbe anyị kwesịrị ịghọta na anyị na-etinye ndụ anyị na akara ma ọ bụrụ na anyị chebe ya, echere m na anyị kwuru na ọwa ahụ na iwe dị n'okporo ámá bụ nzuzu na enwere olile anya ọ rutela ugbu a mana debe ndị enyi gị mara mma m nwetara ya , ị maara na onye ọ bụla na-eche na ọ bụ mkparị nke onwe, ọ dị obere na ọ dị onye ọ bụla na-anwa ịgbaso gị n'okporo ámá, bịa, hapụ ya ugbu a, dị nzuzu, ee ọ bụ nzuzu, amaghị m ebe ndị a nọ site, o si na ubu ya abughi a drive ụzọ ma ọ bụ ihe, ndị mmadụ na m na-eche na m na-agbalị na Zere okporo ụzọ ma ọ bụ ihe ma na-ege ntị, nke a bụ iwu, abụla onye nzuzu, emela ka onye dị otú ahụ jerk n'okporo ụzọ doro anya echere m na nwa okorobịa ahụ na nwa bụ na-agbada n'ubu nye onye ozo a nke na-agbali itinye onwe ya n'ime ya, na-adighi ka onye nzuzu ma nke a bu uzo ozo ya na onye na-anya ugbo ala ya na anya nke dashcam bu nke na-anabataghi ndi enyi gi gha agha di nma n'agbanyeghị ihe m, agaghi eso ya nihi na i na ese okwu n'ihi na oge ufodu nwoke na esite na ugbo ala bia bu onye iberibe ma buru oke nsogbu, ugbua ka m gwa gi i huru otu okorobia mepere uzo ugbo ala dika ihe a aghaghi m ghọta ugbu a na ọ gaghị apụta ịjụ gị ka ị bụrụ ndị enyi ya ọ hụrụ n'anya, ọ na-apụ ebe ahụ maka na ọ na-enwe nsogbu na di r ọ chọrọ ịzinye gị ntị ọ chọrọ inye gị nsogbu, yabụ ọ nweghị ike ịgwa gị zuru ezu, ma ọ bụrụ na ị nwere ike.
N'oge a ọ na-apụ n'ụgbọala ma ị nọ n'aka nri na gburugburu ya ma ọ bụ n'aka ekpe Amaghị m ihe ọnọdụ okporo ụzọ dị ka n'aka ekpe ya n'oge ahụ, anọla ebe a, ọ bụrụ na ị nwere ike nyere m aka, ọbụlagodi na ị ga-alaghachi azụ ntakịrị, mana ịmara na ị nweghị ike ịme omume ya oge niile ebe a ugbu a rịba ama, nwoke a dị ka m chọrọ ịlụ ọgụ ọzọ, ọ gaghị abịa na windo were gị Itie ebe a dịkwa mma nke mere na m nwere ike ịgwa gị ezu atụgharị windo elu jide n'aka na na nke a ị nwere gị window maka sekọnd ole na ole na-echeba ụgbọala n'ihi na ọ bụ ihe mgbochi gị ma zere ịbụ merụrụ ahụ site a Ihọd jide n'aka akpọchiri ọnụ ụzọ gị jiri ụgbọ ala gị dịka onye na - arụ ike na - arụ ọrụ ma na - arụkwa ihe mgbochi ọfụma, anaghị m ekwu dị ka ike na-aba ụba iji kụọ ya n'ụgbọ ala kama ka ọ hapụ gị ma nwee ihe mgbochi dị irè otu aro ọzọ ebe a. 'Amaghị n'oge ahụ ihe dịka egbe ga-aba uru ebe a n'ihi nwoke ahụ Eleghị anya ọ bụghị ebumnobi ebumnuche egwu ọ bụla, mana nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere m ji eyi OC spray na nwa okorobịa ahụ na-eti m mkpu, na-eti m mkpu, na-agbanye aka ya ma na-eme ihe ngosi weebụ na-ewe iwe na-eme ka nke a bụrụ ohere dị ukwuu iji gbakọta n'ihi na ị na-ege ya ntị ọzọ, ị gọzie ya ihe oriri na-ekpo ọkụ na nke ahụ ga-enye ya ihe ọzọ ọ ga-eche banyere ya, ebe ọkụ mmụọ ị nwere ike ịpụ mpaghara ahụ dị ize ndụ Oku nke ndị uwe ojii, ugbu a, o zuru mkpịsị ugodi nke ndị na-agbachitere anyị, ebe a bụ ebe ọ na-ewere ihe onwunwe ya ugbu a Izupụ mkpịsị ugodi ya bụ nnukwu nsogbu, ee ọ bụ nnukwu nsogbu, mana mgbe ị si n'ụgbọala cheta na ị na-etinyekwa onwe gị na nsogbu, ikekwe ka mma ebe a iji nweta akara akwụkwọ nke nwa okorobịa ahụ, gwa ha mara, kpọọ 911, gwa ha ihe mere n'ihi na ndị uwe ojii ga-egosi ngwa ngwa ma ị nwere ike ịnweta onye ahụ n'okporo ámá na-eso ma ọ bụ ihe ọ bụla ma hụ ebe ọ nọ wee weghachite igodo gị na-enweghị itinye onwe gị n'ihe ize ndụ otu ihe m chọrọ na-eche echiche ebe a, onye na-agbachitere anyị wụpụ na a baseball ụsụ Echeghị m na a baseball ụsụ bụ nnọọ uru bụ- a-agbachitere ngwá ọrụ na a ụgbọala dabeere na gburugburu ebe obibi dị ka ọ na-ewe ọtụtụ anya ka siwing n'ụzọ dị irè na-enweta ike ọ bụla. You gaghị enwe ike ịpụ apụ na okpu baseball nke ọma, ị ga-agbanye ya na ya. M na-arụsi ọrụ ike na ụgbọala na ọnụ ụzọ na ihe ndị yiri ya, nke ahụ agaghị abụ ezigbo ngwá ọrụ yabụ na ọ bụghị nke m nwere ike ịkwado ngwa ọrụ nchekwa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla n'ihi na ọ bụghị Ọ dị irè ma ọ nweghị uru ọ bụla Nwoke a nọ ebe a n'ihi na ihe anyị ga-ahụ bụ mgbe ọ bịaruru ụgbọ ala ahụ wee nwaa ị nweta ngwongwo ya, ọ tụbara usu ahụ ma usu ahụ pụọ ma ugbu a ọ banye n'ime ya na-alụ ọgụ n'ókèala ọ nweghị ikike inwe ihe onwunwe ya azụ, n'ezie na ọ nweghị ikike n'ihe onwunwe ya, mana ọ na-ekpughe onwe ya na oke ihe egwu ma yabụ nke ahụ abụghị ihe amamihe, ị ga-abụ onye na-agbachitere onwe ya ugbu a ihe hell ị ga-eme ebe a ma ọ bụrụ na nwoke ahụ jidere gị ị ga - ejide ndụ m, ị ga - eme ike gị niile nke a bụ kpọmkwem ihe nwa okorobịa ahụ mere ebe a nwere obi ụtọ na ọ nwere ike ijide ya 'ruo mgbe ihe ndị a gbadara ma ugbu a, ọ bụrụ na ị gụọ akụkọ ahụ, nwoke ahụ kwuru na m' Aga m egbu gị mgbe ị na-ebugharị ya n'okporo ụzọ na 40 mph, yabụ n'oge ahụ, nwoke a nọ doro anya, oh mba, gịnị ka m ga - eme ma ọ bụrụ na o nwere egbe ya? anyị jiri ya n'oge ahụ, mana ka anyị mụta ihe mmụta ka mma ebe a maka etu anyị ga-esi jide n'aka na anyị na-eji ụgbọ ala anyị nke ọma, na anyị anaghị azaghachi iwe iwe, na anyị nwere ike ịbụ ụdị ụdị maka ụdị egwu a nwere OC ịgba na anyị nakwa na anyị ga-ezere itinye onwe anyị n'ihe egwu ọzọ iji kpuchie ịnyịnya ibu anyị
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji kpọọ ndị ọkwọ ụgbọala asị?
N'agbanyeghị etu i si rubere iwu ma ọ bụ okirikiri ugwu n'ụzọ dị obere, enwere mpeọkwọ ụgbọalana nanịasị ndị na-agba ịnyịnya ígwèn'ihi na ịnọ n'okporo ụzọ na ọ na-atụ ụjọ.Ndị na-agba ịnyịnya ígwèna-enwe ezi nsogbu ma ọ naghị ewe nnukwu mbọ iji gbanwee omume iji chebe ha nke ọma.
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji akparị ndị ji ụkwụ aga?
Ha abụọndị na-agba ịnyịnya ígwènandị ji ụkwụ agana-agafe n'okpuru ike nke aka ha ma bụrụ ndị na-adịghị ike,ya meremgbe mmadụ na igwe kwụ otu ebe kwadoro aonye ji ukwu agaọ na-adị ka ọ bụ aghụghọ nke onwe. Ebe otutu nsogbu a sitere na nkwenye nke akuko banyere akuko na ndi mmadu agha kwesiri ime dika ha bu ugbo ala.
Gịnị mere ndị ọkwọ ụgbọala ji akpọ ndị na-agba ịnyịnya ígwè asị?
Kedu ụdị nke iwe iwe n'okporo ụzọ?
Drivingkwọ ụgbọala na-eme ihe ikebụụdị iwe iwe dịkarịsịrị na ụzọ.
Gịnị kpatara oke okporo ụzọ m ji jọọ njọ?
Ọ bụ ezie na o siri ike ikwu kpọmkwem ihe ga-eme ka mmadụ pụọ, ụfọdụ n’ime haiheihe kachasị dị naiwe iweihe omume bụ: Okporo ụzọ dị arọ. Ọ dịghị onye na-enwe mmasị ịnọdụ n'ụgbọala, mana ndị ọkwọ ụgbọ ala enweghị ndidi na-ewe iwe ọsọ ọsọ karịa; na mmekpa ahụ pere mpe nwere ike iwepụ ụdị onye a ngwa ngwa.
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji eme dị ka ha nwere okporo ụzọ?
Dị ka onye na-agba ịnyịnya ígwè, anyị nwere otu ikike naokporo ụzọdị ka ndị ọkwọ ụgbọalamee. Ọ bụrụhaala na anyị na-agbaso iwu nkeokporo ụzọmgbe ahụ anyịnwee okporo ụzọka ukwuunwee aọkwọ ụgbọ alanwe uzo. Ee ị nwere otu ikike, mana ị nweghị otu physics. Iwu enweghị ike ịgbanwe igwe kwụ otu ebe ka ọ bụrụ otu ụgbọ.9 2016.
Kedu ụdị igwe ọgba tum tum bụ oke iwe?
The Road Ọnụma bụ eziokwu gravel igwe kwụ otu ebe, stiif, ngwa ngwa, na ukwuu oru oma. N'ihi taya ya sara mbara, ọ na-efegharị n'elu gravel na site na apịtị dị mfe, ọbụnadị olulu ma ọ bụ mgbọrọgwụ adịghị eme ya. Ihe nkpuchi diski dị ike bụ nnukwu gbakwunye, ọkachasị na ọnọdụ ihu igwe mmiri.
vitamin maka ike
Olee nnukwu ndị taya na ụzọ ọkụ ọkụ mmụọ igwe kwụ otu ebe?
Igwe kwụ otu ebe a amaghi ụdị ọ bụla: ya na taya ya 29 '' ọ na - egosipụta agwa MTB, ebe ọnya siri ike na ngwongwo ngwongwo ndị na-ebu ibu na-ekpughere mkpụrụ ndụ ihe nlegharị anya ya. The ike, ihu igwe-onwe ha post ugwu diski brek hụ na nchekwa na ogologo ala - nke dị mkpa karịsịa mgbe ị na-eji ọtụtụ ibu aga njem.
Ugboro ole ka ọnụma n'okporo ụzọ na-adị n'etiti ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị ọgba tum tum?
Typicaldị oke ọgba aghara dị n'etiti ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enwekarị okwu ole na ole ịhọrọ n'etiti ibe ha, na mgbe ụfọdụ onye ọkwọ ụgbọ ala na-eji ụgbọ ala ha dị ka ngwa ọgụ n'ebe onye na-agba ígwè nọ. Ya mere, ọ dị obere ka onye na-agba ịnyịnya ígwè nyeghachi nkwụghachi anụ ahụ ọ bụla (ọ bụghị na onye ọ bụla nọ na-agba izu kwa izu na-anabata omume ahụ).